Manufacturer of wellness supplements material - Wisepowder About
Wisepowder iri kutarisa kutsvagurudza, kugadzira uye kugona kwezvigadzirwa zvewaini kwete maootropics, zvinovaka muviri zvinovaka muviri uye mishonga nezvinwiwa. Isu tiri nyanzvi uye ine ruzivo kugadzira uye mutengesi.
Wisepowder ikambani inozivikanwa uye inorumbidzwa kambani ine makore anopfuura makumi maviri yechiitiko muChinese lutraceutical indasitiri. Uye, parizvino, zvese kugadzirwa kwezvinongedzo zvine chiyero chakanakira control management system iyo inonyatsoenderana nemitemo yeGMP. WISEPOWDER inopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Uye, imwe timu yatinobatsirana nayo ma locates muUS ichapa basa rine chekuita nevatengi vedu pasirese.
Wisepowder yakamisa nzvimbo yekuvhiya yakarongedzerwa kunze kwenyika zviridzwa kubva kuGermany, Japan neUS kuti tiongorore pamwe nekuumbwa kwezvinhu zvemukati zvinoshanda zvinosimbisa iyo Wisepowder inodzora matanho ese ekugadzira maitiro.
R & D chikuva
Enzyme yakatungamira shanduko yeshanduko
Microbial Genome Editing chikuva
Diki testof Fermentation chikuva
Diki bvunzo yeEnzyme inobetsera chikuva
Diki bvunzo yeChigadzirwa Kubuditsa Platform
Pilot bvunzo yeFedation chikuva
Pilot bvunzo yeEnzyme inobatsira chikuva
Pilot bvunzo yeChigadzirwa Chadziro Ipuratifomu
kune makumi maviri nematanhatu vane hunyanzvi uye vane ruzivo nezvebiology
akabatana uye akavaka kubatana kwenguva yakareba nema laboratori makumi mapfumbamwe nemasere pasirese
hwagadzwa muna 1999. Pashure pemakore 20 akatsiga kukura
pamwe nevane zana nemakumi masere nematatu akadzidziswa tsvimbo.
- Fekitori Garari
Subscribe to Newsletter yedu uye tora Tora mutengo!